Akwụkwọ kacha mma echiche efu: gịnị bụ echiche efu na nke kachasị mma | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Fantdị echiche efu bụ otu n'ime ihe kachasị mma na akwụkwọ kacha mma. Ma ọ bụ na enwere ọtụtụ aha ndị dere anyị nwere ike ịkpọpụta na nke ahụ bụ nkọwa doro anya nke ụdị ahụ. N’ezie, ụdị akwụkwọ a bụ otu n’ime ndị mbụ a gụrụ, ebe ọ bụ na ha na-atọ ụtọ ma na-ekwe ka echiche ahụ na-efe.
Ugbu a, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na e nwere ọtụtụ puku akwụkwọ na ahịa, enwere ụfọdụ ndị a na-ewere dịka akwụkwọ kacha mma, Achọrọ ọgụgụ maka onye ọ bụla na-agụ akwụkwọ na-anụ ọkụ n'obi banyere isiokwu a. Anyị atụpụtala edepụta ha iji mee ka ọrụ gị ọsọ ọsọ yana ịmara ndị ị gụrụ na ndị nke na-echere. Want chọrọ ịma ndepụta anyị?
1 Kedu ihe bụ fantasy
2 Ndepụta nke akwụkwọ kacha mma
2.1 Onye nwe anyi
2.2 Ihe E Mere nke Narnia
2.3 Akwụkwọ kacha mma: Harry Potter
2.4 Akwụkwọ Fantasy kacha mma: Akụkọ kachasị njọ
2.6 Akwụkwọ nke ndị na-egbu ndị eze
2.7 Towerlọ elu gbara ọchịchịrị
Kedu ihe bụ fantasy
Echiche efu, ụdị echiche efu ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ efu, dịka esi mara ya, bụ otu n'ime isiokwu kachasị aga nke ọma kemgbe ọtụtụ afọ. Ihe ejiri mara ya dika “itugbu” ya bu ezi okwu, ya bu, ihe ezubere ya bu - mepụta akụkọ gafere eziokwu, ebe onye ode akwukwo nwere nnwere onwe zuru oke iji zulite echiche ya. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị na-ekwu okwu banyere otu ụdị ebe enweghị oke, enwere ike ịmepụta ihe niile ogologo oge ọ nwere ezi uche maka akụkọ ahụ.
Ọ bụrụ na ị maghị, fantasy bụ ụdị nke nọnyeere anyị ruo ọtụtụ puku afọ. N'ezie, a na-eme atụmatụ na mmalite ya malitere n'akụkọ ifo na akụkọ mgbe ochie, ebe a na-akọ akụkọ banyere ndị dike mụtara ihe, ma ọ bụ ndị zoro aka na ndị ọzọ. E ji olu mee ka akụkọ ndị ahụ pụta, edeghị ha, opekata mpe na mbido. Ma ọ bụ na nkọwa doro anya banyere ụdị echiche efu bụ, n'enweghị obi abụọ, Tolkien, tinyere aha ndị dị ka ụmụnne Grimm, George RR Martin, Terry Pratchett ...
Ndepụta nke akwụkwọ kacha mma
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmata akwụkwọ ndị kwesịrị ịdị na ndepụta gị nke ihe dị mkpa, lee, anyị ga-ekwu maka nke ọ bụla n'ime ha ka ị wee mara ntakịrị ntakịrị ihe atụ nke akwụkwọ kacha mma niile edere (na anyị ga-agharịrị hapụ ụfọdụ).
Onye nwe anyi
Dị ka anyị kwuru na mbụ, JRR Tolkien bụ akara ngosi na ụwa nke echiche efu na, n'ihi nke a, ọ kwesịrị ịdị na ndepụta a. Taa a na-ahụta ya dịka akwụkwọ ochie, mana ọ naghị apụ n'ụdị. Na mgbakwunye, mmegharị nke ejiri rụọ ọrụ ya mere ka ọ ghara ịdaba na nchefu na ọtụtụ ndị edemede ọhụụ taa dabere na akụkọ Tolkien.
Onye-nwe Mgbaaka bụ akụkọ banyere Frodo Baggins, hobbit nke ebumnuche ya bụ ibibi Mgbaaka Pụrụ Iche nke Sauron, onye nwe ọchịchịrị. Ọ bụrụ na o nweta ya, ọ ga-emikpu Middle-ụwa n'ọchịchịrị; Maka nke a, na njem ya ọ ga - esonyere ya na mkpụrụ edemede ndị ọzọ na - anọchite agbụrụ ndị bi na "ụwa".
N'ezie, ị gaghị echefu na akụkọ gara aga, The Hobbit; na nke na-abịa n'ihu (nke bụ n'ihu ha niile mana a na-agụ ya ma emechaa), nke bụ The Silmarillion. Akwụkwọ edemede atọ dị ukwuu ma tụlee akwụkwọ kacha mma.
Ihe E Mere nke Narnia
Ihe E Mere nke Narnia dabere na a saga nke akwụkwọ akụkọ CS Lewis dere. N'ime ha, onye edemede ahụ kere Narnia na enweghị ebe, ụwa ebe ọdụm Aslan na-achị ma bụrụ nke ndị akụkọ ifo, ndị na-ekwu okwu banyere ụmụ anụmanụ na ee, ndị ajọ omume. Brothersmụnna nwoke anọ rutere ebe a site na kọlọtọ dị egwu ma, ka akụkọ ahụ na-aga n'ihu, anyị na-ahụ mgbanwe nke ndị odide (na mgbakwunye na mgbanwe na ha).
Akwụkwọ kacha mma: Harry Potter
Ee ee, Harry Potter bụkwa akwụkwọ na, ọ bụ ezie na a na-eche na ọ bụ nke ụdị ụmụaka, n'ezie gụnyere echiche efu. N'akwụkwọ a, akụkọ a kọrọ nwere njirimara niile nke echiche efu: ụwa na-adịghị adị, ihe odide ndị na-adịghị adị, anwansi ...
Banyere akụkọ ahụ, ọ na-ewebata anyị nye nwata nwoke bidoro ịmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ Hogwarts nke anwansi na ịgba afa, yana site n'akwụkwọ ọ na-achọpụta ihe nzuzo banyere nne na nna ya, ndụ nke ya na kwa banyere ndị ọzọ, gụnyere "villain of turn ". N'ezie, enweghi otutu ngwuputa na anwansi.
Akwụkwọ Fantasy kacha mma: Akụkọ kachasị njọ
Michael Ende bụ onye kere akwụkwọ a, na ụbọchị ya ọ bụ nnukwu ọganiihu. N’ezie, ọ bụ otu n’ime mba ndị ahụ jisiri ike rute ọtụtụ mba, ebe ọ bụ na a sụgharịrị ya gaa n’asụsụ 36.
Na gịnị kpatara nke a? Ọfọn, n'ihi na ọ gwakọtara ezigbo ụwa na nke anwansi, si otú a na-emepụta akụkọ ebe ị nwere ike igosipụta onwe gị na n'otu oge ahụ ị chọsiri ike ibi ndụ njem nke agwa ahụ.
Nke a saga akwụkwọ bụ nnọọ ọtụtụ, ebe ọ bụ na nwere akwụkwọ karịrị iri anọ. Ejikwa fantasy, kamakwa ọchị. N’ezie, e nwere ebe e zoro aka n’akụkọ ifo ndị ọzọ, ee, na-edegharị ndị a.
Edere Terry Pratchett, ọ bụ nnukwu ntụpọ n'etiti ndị Fans nke ụdị echiche efu n'ihi ụwa e kere na ha, yana ọchị ị ga-ahụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị ga-eji ọtụtụ awa gụọ ma chịa ọchị mgbe ị na-eri ya.
Akwụkwọ nke ndị na-egbu ndị eze
Edere ya Patrick Rothfuss, o nwere ụfọdụ Tolkien vibe na ndị edemede ndị ọzọ, ọtụtụ n'ime ha nwere mmasị na ya na ndị ọzọ anaghị amasị ya n'ihi na n'ezie "enweghị ihe ọjọọ." Ọ bụ n'ezie akwụkwọ akụkọ nke onye bụ isi, Kvothe, onye na-akọ akụkọ ihe ndị o merela kemgbe ọtụtụ afọ. Agbanyeghị, na-eburu n'uche na akwụkwọ nke atọ apụtabeghị (onye edemede ahụ na-emekwa ka anyị chere maka afọ 7), nke bụ eziokwu bụ na amabeghị ma ọ nwere ike ịgbanwe akụkọ ahụ.
Towerlọ elu gbara ọchịchịrị
A maara Stephen King dị ka onye na-atụ egwu. Ma eziokwu bụ na Site na akụkọ a, dabere na uri, Eze na-eji ụdị echiche efu. N'ime ya ị ga-ahụ onye ọhụụ, Roland Deschain si Gilead, onye kpebisiri ike ịga site na Middle World iji chọta Darklọ Elu Ọchịchịrị, ebe onye gburu ọchụ nke gburu ndị ya niile bi.
Ọ bụ ezie na ọ bụ echiche efu, nke bụ eziokwu bụ na ọ na-agwakọta ọtụtụ ihe nke ochie ọdịda anyanwụ, yana akụkọ sayensị (ọnụ ụzọ na-eburu "dike" anyị na ụwa ndị ọzọ), ụjọ (ya na ọtụtụ ndị iro ọ na - ezute ...).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Akwụkwọ kacha mma
Chineke nke Mgbaaka, Echere m na otu n'ime akwụkwọ kacha mma kachasị mma. Obu oru nka.
Jenụwarị. Nhọrọ nke 5 poems maka ọnwa wintry
Akwụkwọ kacha mma Stephen King